Soomaaliya oo muddo kooban dib u fasaxday duuulimaadyada caalamiga ah - BBC News Somali
Soomaaliya oo muddo kooban dib u fasaxday duuulimaadyada caalamiga ah
Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dib loo fasaxay duulimaadyada caalamiga ah ee wadanka tagi jiray muddo labo maalmood ah sababo lagu sheegay inay jiraan muwaadiniin Soomaali ah oo ku xayiran garoomo dhawra ah.
Wasiir Maxamad Cabdillahi Oomaar oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in sababta ugu weyn oo dib loogu fasaxay duulimaadyada diyaaraddaha ee caalamiga ah ay ahayd in fursad la siiyo dad Soomaaliyeed oo ku xayiran garoomo diyaaradeed.
" Waxa soo baxay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka yimaadeen wadamo fogfog oo doonayay in ay wadankoodii yimaadaan ayaa ka soo gaari waayay oo ku xayirmay garoomo kala duwan oo caalami ah, qaar illaa sedex boqol oo qof ku dhaw waxay ku xayirnaayeen Adis Ababa, qaar waxay ku xayirnaayeen Dubay, iyo meelo kale oo kala duwan sida Nairobi, marka dadkaasi Soomaaliyeed oo qaarkood aanay fasax u haysan ay ku galaan wadamada ay ku xayiran yihiin, dadna aanay ka garaneynin oo ku dhibaateysnaa ayaa waxan ogolaanay in ay wadankoodii ku soo laabtaan, arintaasina ay qaadato illaa labo cisho, waxaana rajeynayaa inay labo cisho ku soo gabagaboodo" ayuu yiri wasiir Oomaar.
Soomaaliya ayaa lagu aaky kiiskii ugu horreeyay oo Corona ah isbuucii hore. Bukaanka ayaa la shegay inu dalka dibaediisa ka yimid, waxa uuna ku jiray karantill.
Dowladda Soomaaliya: Dhamaan duulimaadyada taga Kismayo waa in ay soo maraan Muqdisho
Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in labo maalmood kadib ay dib u bilaaban doonto shan iyo tobankii cisho ee xayiraadda lagu soo rogay duulimaadyada caalamiga ah ee wadanka tagi jiray iyo kuwa kabixi jiray.
Dhinaca kale wasaaraddu waxay sheegtay in labadaa maalmood ee la fasaxay diyaaraddaha inaanan wadanka la keeni karin xamuul aan ka ahayn daawo iyo raashin.
Dowladda ayaa sidoo kale si ku meel gaar ah u hakisay waxbarashada guud ahaa.